Cotton nembato uye paraffine wakisi kenduru - China Litbright Candle (shijiazhuang)
Cotton nembato uye paraffine wakisi kenduru
Basic Info Model No .: G75-0450H Type: Tapered Material: Paraffin Wax Usage: Funeral, Holiday, SPA, Religion, Wedding, Party, Birthday, Home Lighting, Decoration Rinoshanda: Lighting Color: White Preferencias: Unscented Size: 7 * 10cm Kwerusenzi Time: 8H Processing: Machinery inosiyana: Good Quality Additional Info Packaging: mabhokisi kavha negoho: matani 30 pazuva Brand: Litbright Transportation: Ocean, Land, Air Nzvimbo Origin: China Supply Mano: 3 × 20 'fcl Chitupa: CE BSCI o ...
Siyana Sizes: Quality Good
Kavha: mabhokisi kavha
Negoho: matani 30 pazuva
Supply Mano: 3 × 20 'fcl
Chitupa: CE BSCI
Our zvinhu ndiye 100% Paraffin Wax mumwe 70% Paraffin wakisi uye 30% mafuta emichindwe. Our chikuru zvigadzirwa zvinosanganisira Wholesale White Shongwe makenduru, multi-mavara mhuri makenduru chanaka, chena pachivara makenduru, multi-mavara akajeka makenduru, chena fluted makenduru, multi-mavara fluted makenduru, chena taper makenduru, multi-mavara taper kenduru. makenduru edu akagadzirwa yakanakisisa mbishi zvinhu, zvinhu izvi zviri unhu hwakanaka uye akura mazano, izvo zvinofarirwa pakati vatengi.
Litbright Kanjera Factory yakatangwa nineties okupedzisira remakore. Somunhu mugadziri pamwe fekitari yakaoma China, tine anopfuura 10 makore kwekurasira makenduru. nzvimbo yedu fekitari anenge 48,000 mativi metres uye isu tiri mumwe guru mwenje vagadziri muna Hebei. Tine pamusoro 800skilled vashandi uye 40 wevanamakanika. Kugadzirwa kukwanisa: 4 × 20 'midziyo / zuva. zvinhu izvi vari unhu hwakanaka uye akura mazano, izvo zvinofarirwa chaizvo pakati vatengi. zvigadzirwa edu aivigirwa kuna America, Europe, Africa uye Australia, etc kunyika dzinopfuura makumi masere.
Customer Logo: Chinogamuchirika
General rokuongorora pamusoro kugadzira asati kurongedza
bato Third rokuongorora: Chinogamuchirika
wose chakaremara chigadzirwa kana dambudziko unhu (kunze kukuvadzwa panguva transporation) zvinogona kutsiva inotevera hurongwa.
Chero chakaremara chigadzirwa kana dambudziko unhu anokonzera mutengi kuti Nokurasikirwa zvinogona ndanyarara hangu zvavo inotevera kuti.
Previous: chena mhuri kenduru
Next: Religious Shongwe chena Candle
White Stick makenduru
Kwakachena paraffine Wakisi chena makenduru